याचिका · Free Rabi Lamichhane · Change.org
Free Rabi Lamichhane
Rhythm Bastakoti ने Nepalese People को संबोधित करके ये पेटीशन शुरू किया
मर्ने मान्छेले आरोप लगाएपछि प्रहरीले सोधपुछको लागि लगेको हो। पक्राउ गर्नलाई रबि लामिछाने कतै लुकेर बसेका थिएनन्। उनले त प्रहरीले बोलाएको खण्डमा जतिबेला पनि उपस्थित हुने जानकारी दिदै आएका थिए।
अनि अर्कोकुरा, रबि पक्राउ परेको खबर सुनेर केही पूर्व माओवादी मित्रहरु, नेकपाका नारदहरु संगै बिदेशमा रहेका केही हरामखोर दलाल तस्करहरुको मुहारमा यतिबेला खुसीको सिमा छैन। ऊनीहरुका Status हेर्दा ठुलै चाडपर्व मनाईरहेको जस्तो भान हुन्छ। मिल्छ भने सानोतिनो भोजभतेर कार्यक्रमको आयोजना गरेपनी हुन्छ दले तस्करहरु हो।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बालुवाटार नै बोलाएर 'म पदमा रहुन्जेल लोकमानलाई केही नगर्नुस् भनेर आदेश दिने प्रचण्डहरुले अनेक तिक्डम गरेर रबिलाई फसाउन पनि सक्नेछन् ।' 'अब पशुपतिनाथ आएपनी रबिलाई बचाउन सक्नेछैन ' भन्दै हिजै status लेख्ने केही पूर्व माओवादीका अभिव्यक्तिले ले यस्तै देखाउछ।
तर हेक्का रहोस्! ब्यक्तिगत दुश्मनीका कारण निर्दोषलाई फसाउन खोज्ने तिमीहरुको कालो कर्तुतलाई माथीबाट भगवानले हेरिरहेका छन्। तिमीहरुले गरेको पापको फल तिम्रा सन्तानले भोग्न नपरोस्। १५ दिन अगाडि आफ्नो गुरु मानेर फेसबुकमा प्रोफाईल तस्बिर राख्दै सम्झिएको ब्यक्तिले १५ दिनपछि त्यै ब्यक्तिलाई अनेक आरोप लगाउदै मर्नुको पछाडि रबिको हात छ भनेर म यो जुनिभर बिश्वास गर्न सक्नेछैन।
दुई महिना अगाडि छोडेको News 24 टेलिभिजन,त्यै माथी अर्को टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउन सुरु गरिसकेको ब्यक्तिले आफूलाई धम्क्याउनेहरुको भण्डाफोर गर्छ कि रुदै आत्महत्या गर्छ ? जोखिम मोलेर त्यति खतरापूर्ण रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार आफ्नै सहकर्मीको धम्कीको कारण मरेको भनेर सोच्नेहरुको दिमाग कत्रो होला ?
"सिधाकुरा प्रधानमन्त्री" मा प्रचण्डले रबिलाई निकालेपछि रबिले बोलेका केहि कुराहरुकै कारण रबिको बिरोध गर्दै आएका केही रबि फोबियाहरुले अहिले दिपावली मनाउन सुरु गर। तिमीहरु अहिले मादल बजाओ, समय आएछ भने एकदिन एकोहोरो संख हामी फुक्नेछौ ।
अन्तमा: सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रहरीलाई हामी लाखौं रबिहरु सक्दो सहयोग गर्नेछौं।
I am with ravi lamichanne